FAQ amin'ny jiro ivelany
Raha tsy hitanao ny hazavana tianao,tsindrio eto raha hifandray aminay, Eurborn koa dia manome serivisy fanamboarana vokatra.
F: Manana kaomandy kely indrindra ve ianao?
A: Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana ny habetsaky ny baiko farany ambany indrindra.Raha mitady hivarotra indray ianao nefa amin'ny fatra kely kokoa dia manoro hevitra anao izahay hijery ny tranokalanay.
F: Afaka manana baiko santionany ho an'ny hazavana ve aho?
A: Eny, mandray ny baiko santionany izahay mba hitsapana sy hanamarina ny kalitao.
F: Inona no karazana fomba fandoavam-bola raisinao?
A: Azonao atao ny mandoa vola amin'ny kaontin'ny banky, Western Union.30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana alohan'ny fandefasana.
F: Ekena ETL ve ny jironao?
A: Eny, manana UL, CE, ROHS, ISO certifications, sns ihany koa izahay ary afaka manantena izany amin'ny jiro rehetra ianao.Izahay koa dia afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy ho anao raha ilainao.
F: Mety ve ny laser ny logo amin'ny vokatra maivana?
F: Inona ny salan'ny fotoana fitarihana?
A: Ho an'ny santionany, ny fotoana nitarika dia tokony ho 7 andro.Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana nitarika dia 20-30 andro taorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola.Lasa mandaitra ny fotoana fitarihana rehefa (1) nahazo ny petra-bola nataonao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany momba ny vokatrao izahay.Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fe-potoanao ny fotoam-pitantananay, azafady mba diniho ny zavatra takinao amin'ny fivarotanao.Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome izay ilainao izahay.Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
F: Manome antoka ho an'ny vokatra ve ianao?
A: Eny.Eurborn dia manome antoka roa taona manomboka amin'ny datin'ny fividianana.Raha manana olana ao anatin'ny fe-potoana fiantohana ny jironao, dia mifandraisa aminay amin'ny sary sy ny laharan'ny baikonao.Raha te hianatra bebe kokoa momba ny fiantohana ianao dia azafadykitiho eto.
F: Miantoka ny fandefasana vokatra azo antoka sy azo antoka ve ianao?
A: Eny, mampiasa fonosana fanondranana avo lenta foana izahay.Ny fonosana mahazatra anay dia boaty miloko volontany voajanahary.Ny fonosana manokana sy ny fitakiana famonosana tsy manara-penitra dia mety hisy fiampangana fanampiny.
F: Ahoana ny momba ny saram-pandefasana?
A: Ny saran'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba fidinao hahazoana ny entana.Express no fomba haingana indrindra nefa lafo indrindra.Ny fitaterana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be.Ny taham-pitaterana entana dia tsy azonay omena anao raha tsy fantatray ny antsipirian'ny vola, ny lanjany ary ny lalana.Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Jiro LED intany Jiro antany InGround Luminaires Jiro antany Jiro antanety Jiro ambanin'ny tany Ny vokatra rehetra